Shayton Equilibrium Hypercar - Joornaalka Naqshadeynta
Hypercar Shayton Equilibrium wuxuu matalaa hedonism saafi ah, qallooc ku socda afarta giraangiraaf, fikrad aan caadi aheyn oo dadka badankiis iyo xaqiijinta riyooyin si nasiib yar u leh. Waxay ka dhigan tahay raaxada ugu dambaysa, aragtida cusub ee ka timaadda hal dhibic ilaa meel kale, halka yoolku aanu muhiim u ahayn khibrada. Shayton waxaa loo dejiyey inuu ogaado xadka awoodaha maaddada, si loo tijaabiyo soosaar cagaaran oo cusub iyo alaabo kor u qaadi kara waxqabadka iyadoo la ilaalinayo xurgufta sicir bararka. Wejiga soosocda waa in la helo maalgashade / yaasha oo ka dhiga Shayton Sinnaanta inay noqoto mid dhab ah.
Magaca mashruuca : Shayton Equilibrium, Magaca naqshadeeyayaasha : Andrej Stanta, Magaca macmiilka : Shayton Automotive.
Gawaarida, socodka iyo naqshadeynta gaadiidka